अन्तिम पासवर्ड | को साथ हाम्रो पासवर्डहरू प्रबन्ध गर्नुहोस् ग्याजेट समाचार
लास्टपास, हाम्रो पासवर्डहरू ब्यवस्थापन गर्न सुरक्षित तरीका
के तपाइँसँग वेबमा सेवाहरूको ठूलो संख्या छ? यदि तपाईं एक व्यावासायिक व्यक्ति हुनुहुन्छ वा कोही जो तपाईंको साथीहरू र परिवारका लागि महत्वपूर्ण छन्, तब सायद तत्काल उत्तर "हो" हो; यस कारणले गर्दा, तपाई जस्तो हामी पनि त्यहाँ अन्य धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन फरक ईमेल खाताहरू हुन सक्छन्, सामाजिक नेटवर्कमा, विभिन्न अनलाइन स्टोरहरू र केही अन्य वातावरणहरूमा, हामीले यो अन्तिम कारण प्रयोग गर्नुपर्दा अन्तिम कारण हो।
लास्टपास एक उत्कृष्ट पासवर्ड प्रबन्धक र प्रबन्धक हो, कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणहरूको बिभिन्न संख्यासँग अब उपयुक्त छ।
लास्टपाससँग हाम्रा पहिलो चरणहरू
हामीले त्यो उल्लेख गरेका छौं LastPass यो हाम्रो पासवर्डहरू प्रबन्ध गर्नका लागि एक उत्कृष्ट विकल्प हो, यस्तो स्थिति जुन पूर्ण रूपमा उचित छ यदि हामी उल्लेख गर्छौं कि योसँग २ 256-बिट ईन्क्रिप्शन छ, जुन ग्यारेन्टी गर्दछ कि बिल्कुलै कसैसँग यी प्रमाणहरू क्र्याक गर्ने क्षमता छैन बिभिन्न वेबसाईटहरूमा पहुँच। यसका अतिरिक्त, पासवर्डहरू जुन उत्पन्न गरियो (LastPass तपाईं पनि को संभावना छ नयाँ पासवर्डहरू उत्पन्न गर्नुहोस्) हाम्रो कम्प्युटरमा स्थानीय रूपमा स्थित हुनेछ।
LastPass यो उपकरणको एक ठूलो संख्या संग उपयुक्त छ, जो हाम्रो फाइदा हुन सक्छ यदि हामी हाम्रो हातमा छ:
विन्डोज, लिनक्स वा म्याकको साथ एक कम्प्युटर।
एन्ड्रोइड मोबाइल उपकरणहरू, आईओएस, ब्ल्याकबेरी, सिम्बियन, विन्डोज मोबाइल वा वेबओएसको साथ।
यसका अतिरिक्त, LastPass प्लगइनहरू समाहित गर्ने सम्भावना छ वा हाम्रो इन्टर्नेट ब्राउजरमा विस्तारहरू, तिनीहरू मध्येको माइक्रोसफ्ट इन्टर्नेट एक्स्प्लोरर, सफारी, फायरफक्स, ओपेरा र गुगल क्रोम; तपाईंले उपकरण डाउनलोड गरेपछि, तपाईं योसँग एक नि: शुल्क खाता सिर्जना गर्नुपर्नेछ।
एकचोटि हामीले इन्स्टलर चलायौं भने हामी एउटा विजार्ड भेट्टाउनेछौं जुन अपरेटिंग सिस्टमका सबै संस्करणहरूमा समान छ किनकि हामीले यसलाई डाउनलोड गर्यौं।
हामीलाई सोधिने पहिलो चीज यो हो, यदि हामीसँग सक्रिय खाता छ वा हामी नयाँ सिर्जना गर्न चाहन्छौं भने; हाम्रो केसमा हामी यो अन्तिम विकल्प छनौट गर्नेछौं।
खाता सिर्जना गर्न हामीले प्रविष्ट गर्नु पर्ने डाटा हाम्रो ईमेल, सुरक्षित पासवर्ड र वाक्यांश हो जुन हामीलाई यसको सम्झना गराउँदछ। हामीले मास्टर पासवर्ड पनि बनाउनु पर्छ LastPass.
पछि LastPass यसले हामीलाई सोध्नेछ कि यदि हामी अनुप्रयोगलाई सबै पासवर्डहरू बचाउन चाहन्छौं जुन हामीले इन्टरनेट ब्राउजर (हरू) सँग प्रयोग गरेका छौं, यी सुझावहरू स्वीकार्नुपर्दछ।
अर्को स्क्रिनले हामीलाई ती सबै पृष्ठहरू देखाउँदछ जहाँ सम्बन्धित पासवर्डहरू कब्जा गरिएको छ; यदि हामीले विचार ग .्यौं भने हामी तिनीहरू मध्ये कुनै पनि रद्द गर्ने सम्भावना हुनेछ LastPass तपाईंले यो प्रशासन गर्नु हुँदैन।
अन्तमा, लास्टपासले हामीलाई हाम्रो टोलीको पत्यारपत्र मेटाउन अनुमति माग्छ, ताकि सुरक्षा उत्तम छ र कसैले पनि यसलाई चोर्न सक्दैन। किनकि पछिबाट पास्टसले हाम्रो पासवर्डहरू ब्यवस्थापन गर्ने छ, अब उनीहरूको कुकीजमा राख्न ब्राउजर रिमाइन्डरको लागि आवश्यक पर्दैन।
यदि प्रयोगकर्ता भित्र अधिक विशिष्ट सुविधाहरू ह्यान्डल गर्न चाहन्छ भने LastPassत्यसो भए तपाईं आफ्नो सेटि settingsहरूमा जान सक्नुहुनेछ र तपाईंको आवश्यकता अनुसार सूचनाहरू समायोजन गर्न सक्नुहुनेछ; जे होस्, विकासकर्ताहरूको सिफारिस यो हो कि यो क्षेत्रलाई फेला परेको रूपमा छोडियो, जुन यो पूर्वनिर्धारित कन्फिगरेसनमा छ।
यदि हामीले हाम्रो इन्टर्नेट ब्राउजर खोल्छौं र सेवामा पहुँच गर्न कोशिस गर्छौं (जुन हाम्रो याहू ईमेल हुन सक्छ), हामी यसको प्रशंसा गर्नेछौं तारा चिन्ह सहितको गाढा पट्टी माथि देखिन्छ; त्यहाँ प्रयोगकर्ताले "उत्पन्न" गर्नका लागि बटन प्रयोग गर्न सक्दछ नयाँ बलियो पासवर्ड सिर्जना गर्नुहोस्.
यस अपरेशनसँग एक नयाँ विन्डो खुल्नेछ, जहाँ हामी सुरक्षित गर्न को लागी सुरक्षित पासवर्ड को प्रकार को छनौट गर्न सक्दछौं; उदाहरण को लागी, अपरकेस वा लोअरकेस अक्षरहरू, संख्याहरू, क्यारेक्टरहरूको संख्या जुन हाम्रो पासवर्ड र केही अन्य तत्वहरू बनाउँदछ भन्ने कुराको प्रयोग हामी यस विन्डोमा फेला पार्दछौं।
एकचोटि हामीले सेट अप गरेपछि LastPass हामी एक प्राप्तांक प्राप्त गर्नेछौं, जुन यसको विकासकर्ताहरूको अनुसार be ०% सम्म हुने सम्भावना धेरै छ, जबबाट नाफाको हो LastPass तिनीहरू पासवर्ड प्रबन्ध गर्न वा केहि बढि उत्पादन गर्न बाहिर जान्छन्।
यो राम्रो हुनेछ, यदि तपाईं प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ LastPass केही प्रारम्भिक खाताहरूको साथ सुरुमा यो गर्नुहोस्, जब सम्म तपाईं सक्नुहुन्न उपकरण को कार्यहरु र विशेषताहरु को हरेक मास्टर; यो सिफारिस गरिने छैन कि शुरूबाट (र यसको बारेमा विशाल ज्ञान बिना) LastPass) यस अनुप्रयोगको साथ तपाईंको बैंक खाता सेट अप गर्न सुरू गर्नुहोस्।
थप जानकारी - Safeepasswd - बलियो पासवर्ड उत्पन्न गर्नुहोस्, हटमेल मेसेन्जरका लागि बलियो पासवर्डहरू सिर्जना गर्नुहोस्
डाउनलोड गर्नुहोस् - लास्टपास
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » लास्टपास, हाम्रो पासवर्डहरू ब्यवस्थापन गर्न सुरक्षित तरीका
विन्डोज Pro प्रो बाट विन्डोज to मा डाउनग्रेड कसरी गर्ने